खराब बच्चाहरु: बच्चाहरु को उचित पालनपोषण
हरेक परिवारको लागि एक आनन्द - बच्चाहरु भइरहेको। परिवारको आनन्द लागि जरूरी र बच्चा को पूर्ण शिक्षा - एक बच्चाको लागि प्रेम। तर कहिले काँही आमाबाबुले अचाक्ली हो संग उपहार, ध्यान र आफ्नो whims indulging आफ्नो बच्चा Indulge। खराब छोराछोरीलाई आमाबाबुको लागि मात्र होइन तर पनि सारा रूपमा समाज को लागि एक वास्तविक टाउको दुखाइ बन्न। स्वार्थ अरूको आवश्यकता मानिसहरू र भावशून्यता गर्न अनादर गर्ने एक बच्चा सिर्जना गर्छ। प्रेम, ध्यान र स्नेह - राम्रो छ, तर कहाँ खराब किशोरी भविष्यमा प्राप्त गर्न एक स्टप छ तपाईं कसरी थाहा छ? बाबु आमा गल्ती धेरै।
आमाबाबुले बच्चा विभिन्न सामाग्री उपहार कार्य प्रोत्साहन गर्छौं। उदाहरणका लागि: "म तपाईंलाई एउटा नयाँ कम्प्युटर, यदि तपाईं सबै पाँच प्राप्त किन्न छौँ"। यो बच्चा महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्ययन गर्न थाले सुनिश्चित गर्न राम्रो तरिका हो। तर, अर्कोतर्फ, यो विधि छैन लगातार प्रयोग गर्न सकिन्छ। बच्चाहरु हेरफेर को स्पंज रहस्य जस्तै अवशोषित र भविष्यमा भन्न सक्छौं, "म केहि छैन तिमी मलाई फोन किन्न सक्दैन सम्म।" सामान्यतया यस्तो अवस्थामा छन् खराब बच्चाहरु धनी आमाबाबुले, जो सामाग्री स्थिति थप ध्यान र आफ्नो बालबालिका साथीहरूको तुलनामा deprived गरिने चिन्ता को। भौतिक सुरक्षा, परिवारको सोसाइटीका कदर आमाहरु र dads महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन को लागि। महंगा उपहार संग SPOILED छन् जो बच्चाहरु, आफ्नो श्रम मोल छैन र आमाबाबुको यो एक कर्तव्य विचार गर्नुहोस्।
वा विपरित, आमाबाबुले सबै दिन काम, र आफूलाई गर्न बाँकी एक बच्चा। अभिभावकको प्रेम उपहार संग बदलिएको छ। आमा र बुबा छोराछोरीलाई कारण ध्यान गर्न सक्दैन, तिनीहरूलाई pet र मनमा हृदय कुरा। शिक्षा पाठ्यक्रम, बच्चा चाहेको परिवार togetherness प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् जो, छैन सामाग्री, को कृपा सीमित छ। यी बच्चाहरु को बढ्न चिसो, nedolyublennosti, तर पनि खुसी पार्न गाह्रो छ जो खराब व्यक्ति प्रस्तुत।
को whims गर्न pandering
एक मात्र रुन सुरु गर्न छ - र मनमोहक एक चाँदी platter प्रस्तुत गरिएको छ। आमाहरु गर्दा एक बालक एक चकलेट वा नयाँ खेलौना प्राप्त गर्न चाहने, तल्ला र रो मा पतन एक स्टोर मा आफ्नो नसाहरू खर्च गर्न चाहँदैनन्। आमाबाबुले prying आँखा लागि संकोच, र तिनीहरूले capricious, केवल यो डरलाग्दो सपना समाप्त चाहनुहुन्छ जे किन्न। को manipulator, स्थिति राम्ररी थाह छ र यसलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग गर्दछ - यो अवस्था एक बच्चा।
सबैलाई परिचित एक वाक्यांश - "उहाँले एक सानो छ"। त्यसैले तिनले के भन्ने , एक फूलदान भङ्ग बुझ्न - उनको दिदी मा चिल्ला र स्यान्डबक्स मा केटी देखि खेलौना लिएर, उहाँले अप भयो जब, एक सानो छ। आफ्नो बच्चाको लागि बढाइचढाइ प्रेम आमाबाबुको लागि निरपेक्ष manipulator सिर्जना मा विकास। भाव, tantrums, र आदेश सबै को लागि ठाउँ खुल्छ परिवारका सदस्यहरूले। अवलोकन र नियमहरू को कमी को स्वार्थ र permissiveness खेल्छ। परिवारमा मात्र बच्चा - यो गल्ती को एक क्लासिक उदाहरण। आमाबाबुले बच्चा प्रेम र punishing ठट्टा छैन यो चाहनुहुन्छ सबै, लागू।
एक बराबर मा
बच्चा संग संगत - यो धेरै राम्रो। यो भरोसाको एक अर्थमा, अभिभावक सम्बन्ध सिर्जना गर्छ। तर, यो बावजुद, बच्चाहरु प्राय अख्तियार महसुस बिना, एक उठाएको आवाज मा कुरा गर्न, आमाबाबुले शिक्षित गर्न थाल्छन्। समय समयमा म आफ्नो बच्चा स्मरण गराउन आवश्यक छ कि आमा र पिताजी - सम्मान हुनुपर्छ जो परिवार, को विशेष गरी पुरानो सदस्य।
खराब बच्चाहरु। प्रमाण
घरमा र सार्वजनिक ठाउँमा व्यवस्थित tantrums। सबै भन्दा साधारण कारण - इन्कार इच्छित खरिद गर्न।
खाना नयाँ खिलौने गर्न सबै संग Dissatisfaction। त्यसैले सबै बच्चाहरु पट्टाइ लाग्ला, र तिनीहरूले नयाँ मनोरञ्जन वा कुराहरू अन्य बच्चाहरु माग।
आमाबाबुले वा अन्य पुराना परिवार सदस्य, उदाहरणका लागि, नचाहनु राख्न आफ्नो सम्पत्तिमाथि वा खिलौने हटाउन बसालेको अनुरोध वा नियमहरू पालन गर्न विफलता।
स्वार्थ। अरूको लागि अनादर, साझेदारी गर्न नसक्नुको।
तपाईं चाहनुहुन्छ के लागि विनिमय मा राम्रो व्यवहार प्रस्तुत गर्नुहोस्।
शब्द को समझ को कमी "गर्न सक्दैन।"
कसले दोष छ?
खराब बच्चाहरु - अनुचित पालनपोषण को परिणाम। बच्चा प्रेम आफ्नो चरित्र र बानी को गठन गर्न मद्दत भन्दा इच्छित गुडिया वा कार खरीद मा व्यक्त गर्नुपर्छ। लगभग गर्ने धेरै बच्चाहरु संग परिवार मा बढ्न सबै छोराछोरीलाई महंगा उपहार प्राप्त छैन। तथापि, आमाबाबुले प्रियजनहरूलाई, परिवार समर्थन लागि आवश्यकता प्रेम ल्याउन। तिनीहरूलाई लागि प्रत्येक उपहार - मान र आनन्द, एक दैनिक पद। यस्तो छोराछोरीले आमाबाबुको काम आदर र तिनीहरूलाई परिमार्जन छैन। बच्चा, व्यवहार को स्कोप थाहा पर्याप्त आफ्नो आमाको स्कर्ट पछि लुकाउने बिना जीवनको कठिनाइ प्रतिक्रिया र आफ्नै सामना गर्न प्रयास गर्न, उपयोगी छ।
वृद्ध पुस्ता प्रेम र आफ्नो नातिनातिनी ज्यादै पुलपुल्याउने गर्न भनिएको छ। खैर, कहिलेकाहीं तिनीहरूले अलग बस्नुहुन्छ भने र समय समयमा Indulge, तर आमाबाबुले तपाईंलाई बाँच्न र मुख्य हेरविचारकर्ताओं विचार छैन। ठूलो प्रेमले whims र सानो स्वार्थी पूरा पराधीन indulging मा बढ्छ। हजुरआमा द्वारा SPOILED छोराछोरी, वयस्क परिमार्जन र आमाबाबुको तपाईंलाई कस्तो चाहनुहुन्छ प्राप्त गर्न सक्छन् भने, त्यसपछि हजुरबा हजुरआमाले पक्कै आफ्नो सपना वास्तविकता मा embody भन्ने महसुस गर्न सिक्न। हजुरआमा नयाँ पुतली किन्न, वर्जित चकलेट दिन्छ। यो एक समझौता सिर्जना गर्न, पुरानो पुस्ता संग शिक्षा को intricacies छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो overprotection मा nurtured छोराछोरी, स्वार्थी बढ्न र ध्यान कदर छैन र तिनीहरूले परिवार मा राख्नु भनेर काम।
बच्चा बिगार्छ र कसरी गर्न व्यक्ति उहाँलाई शिक्षित गर्न?
आफ्ना छोराछोरीलाई बताउन "कुनै" र हुनुपर्छ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तो जीवन नियम, भावना र अरूको आवश्यकता रूपमा अवधारणाहरु राखे। एक बच्चा कुरा इन्कार, आफ्नो कार्य तर्क छ सुनिश्चित। आमा पैसा र केही उपहार किन्न इच्छा छ भने, त्यसपछि त्यहाँ गलत केही भण्डारमा एक खेलौना किन्न छ। परिवार पर्याप्त बजेट छ गर्दैन भने, तपाईं बच्चा यो बताउन पर्छ। स्थिति बुझेर उहाँले आश्चर्य मूल्यांकन र छानेर तिनलाई सही कुरा छनौट हुनेछ।
आमा र बच्चा, सँगै पर्याप्त समय खर्च गर्नुपर्छ प्ले र संवाद। बालिका र केटाहरू घरेलू घरधन्दा, वरिष्ठ हेरविचार सिकाउनुभयो गर्नुपर्छ। के काम छोराछोरीले व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि कदर गर्न आमाबाबुले आदर गर्नेछन् थाह। अनुशासन र लगनशीलताको बाल्यकाल देखि माथि ल्याए। त्यसैले, अपार्टमेंट सफा गर्न माझ, र एक बच्चा सोध्नुहोस्। डी
अरूलाई र उदारता तिर एक प्रारम्भिक उमेर दया सिकाउन पनि आवश्यक छ। राम्रो मानिस हुर्काउन गर्न प्रमुख कदम को एक - छैन स्यान्डबक्स आमा केही लागि यो किनभने, तिनीहरूको बाल्टिन र shovels साझेदारी गर्न बच्चाहरु बाध्य। लोभ - परिणाम खराब एक।
यसलाई अनुमति छ के को सीमाहरु चिनो गर्नुपर्छ र कडाई तिनीहरूलाई पालना गर्नुहोस्। बच्चा नियमहरूमा एक अंतर याद भने, आफ्नो हेरफेर लागि यो फाइदा लिन निश्चित हुन।
तर यदि केही लाड प्यार गर्नुपर्छ, त्यसपछि, को पाठ्यक्रम, भावना। आमा र बच्चा एक ठूलो शक्ति जडान छ। स्नेह र ध्यान सामाग्री उपहार प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। प्रेमको ट्याक्टायल sensations खाँचो बच्चाहरु गर्न डायपर देखि। चुम्बन, अंगालो र बच्चा र हुनुपर्छ सक्नुहुन्छ लागि खेद महसुस! निस्सन्देह, तपाईंले रोक्न र उमेर मा हेर्न जब जान्नु आवश्यक छ। बच्चाहरु समर्थन र तिनीहरूले के हो तिनीहरूलाई बनाउने आवश्यक छ। ठीक छोराछोरीलाई ज्यादै पुलपुल्याउने - र राम्रो गुणस्तर तिनीहरूलाई शिक्षित!
बच्चा prohibitions र प्रोत्साहन को मनसाय बुझ्न पर्छ। आमाबाबुले कुरा र के राम्रो छ र के खराब छ बच्चा बताउन बाध्य छन्। एक बालबालिका राम्रो व्यवहार गर्न वरदान योग्य भने, त्यसपछि त्यहाँ उसलाई एक आश्चर्य बनाउन केही भन्ने गलत छ। आमाबाबुले साँच्चै राम्रो-योग्य कुराहरू लागि हृदय देखि एक उपहार दिन पर्छ। त्यसैले छोराछोरीलाई वास्तविक आश्चर्य हुनेछ कि कुराहरू, र साधारण अधिग्रहण मूल्यांकन गर्न सिक्न हुनेछ।
सबै आमाबाबुले पहिलो प्रयास मा सही शैक्षिक उपाय हुन सक्छ, र आज्ञाकारी प्रतिस्थापित एक खराब बच्चाहरु संग। आमाबाबुले यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ?
त्यहाँ असामान्य बच्चा व्यवहार छ, यो शिक्षा को नियम, साथै आफ्नो व्यवहार को संशोधित गर्न आवश्यक छ। छोराछोरीले आमाबाबुको स्पन्जले गुण जस्तै अवशोषित, साथै परिवार अवस्था आधारित आफ्नो चरित्र गठन। धैर्य को लालनपालनमा गल्तीबाट सच्याएर केही नियमहरू मदत।
सख्त दैनिक तालिका आफ्नो बच्चा आफ्नो व्यवहार संगठित र नियम पालना गर्न सिक्न मदत गर्नेछ। सुत्न, भोजन र एउटै समयमा मनोरंजन कुराहरूलाई - सही Mischievous बच्चा सच्याउन सुरु गर्नुहोस्।
खराब छोराछोरीलाई अनुशासन चाहिन्छ। घरेलु मद्दत - एक जरूरी। उहाँले, उदाहरणका लागि, कडाई साथ पालना गर्नुपर्छ भनेर धूलो र पानी फूल हटाउन बच्चा विशेष कार्य को लागि समाधान। त्यसैले उहाँले आफ्नो प्राचीन आदर गर्न, अन्य काम मूल्यांकन गर्न सिक्छन्।
रोचक क्लब मा कम्प्युटर गेम वा हेर्दै टिभी प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। पौडी, मूर्तिकला वा संगीत, नयाँ शौक दिन क्रमबद्घ सिकाउन हुनेछ, र साथीहरूले आफ्नो whims ध्यान छैन।
तपाईं कुरा आफ्नो उपलब्धिहरू लागि बच्चा प्रशंसा गर्न आवश्यक छ। वयस्क को भाग मा पहिचान को निराशाजनक आवश्यकता मा बच्चाहरु। हामी खराब व्यवहार एक उठाएको आवाज छैन, र गोप्य कुराकानी समयमा छलफल गर्न आवश्यक छ। त्यसैले बच्चा तपाईं उहाँलाई प्रेम भनेर बुझ्न, तर आफ्नो कार्यहरू संग दुखी हुनेछ।
स्वस्थ भोजन, जोडदार महसुस हुनेछ बाल स्वास्थ्य र मुड सुधार।
बाबु आमा बच्चा
"आफ्नो हात मा लगाउने नगर्नुहोस्, एक नवजात शिशु सुत्न र izbaluesh छैन" - युवा आमा सल्लाह सबै र विविध दिनुहोस्। बेबी आमाबाबुको लागि समर्थन र हेरविचार आवश्यक छ। एक बच्चा एक वर्ष मुनिका बाबु आमा - यो नवजात गर्न मातृ स्नेह, हेरविचार र सहायता को अवधि जीवनको वास्तविकताहरु गर्न समायोजन गर्नुहोस्। यो आमा प्रकृति संग आए, बिगार्छ गर्न असम्भव छ। बेबी manipulated गर्न सकिँदैन, तिनीहरूले भोक, colic, दाँत काटन बारेमा मेरो आमा बताउन रुन। मार्फत स्पर्श र कोमल बाहिर संसारमा तिर सकारात्मक मनोवृत्ति गठन भएको बच्चा हुनुपर्छ। एक वर्ष मुनिका बच्चा बाबु आमा सुरुमा प्रेम र ध्यान को प्रवाह हुनुपर्छ।
ज्यादै पुलपुल्याउने र हुनुपर्छ सक्नुहुन्छ
बाल्यकाल - एक महान समय, न्यानो, दया र खुसी भावना हुनुपर्छ जो। आमाबाबुले - आफ्ना छोराछोरीलाई तिनीहरूको शिक्षकहरू र संरक्षकको स्वर्गदूतहरू गाइड। एक प्रारम्भिक उमेर देखि, तिनीहरूले बच्चाहरु प्रेम दिन र नकारात्मक परिस्थिति बाट जोगाउन बाध्य छन्। सानो manipulator अनुरोध को सख्त कार्यान्वयन उहाँलाई अभिभावकको हेरविचार, तर केवल razbaluet छैन प्रतिस्थापन गर्नेछ। उहाँलाई लागि महत्त्वपूर्ण दिनमा बच्चा स्नेह, परिवार हेरविचार र बहुमूल्य उपहार ज्यादै पुलपुल्याउने। आश्चर्य आश्चर्य, छैन mundane किनमेल हुनैपर्छ। शिक्षा र स्वतन्त्रता को आध्यात्मिक गुणहरू - आमाबाबुले दिन सक्छ जो को मुख्य मान।
शिशु सूत्र, "Hipp": समीक्षा
छोराछोरीको समुद्रको acclimatization कस्तो छ?
का कान छेड्ने बच्चा कुरा गरौं
शिशुहरू लागि एक सूत्र छनौट। समीक्षा र सिफारिसहरू
पहिलो वर्ग मा पहिलो पटक - कठिनाइ कसरी हटाउन
साहित्य मा EpiloguE - यो के हो? एक साहित्यिक काम भागको रूपमा EpiloguE यदि आवश्यक
सजावट लागि प्राकृतिक संगमरमर कसरी चयन गर्ने?
म आइसक्रिम स्तन-खुवाउने गर्न सक्नुहुन्छ: फाइदा र बेफाइदा
अतिथि को समीक्षा peptides पेश गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले लिन रूपमा peptides के हुन्?
जेफरसन डेविस: जीवनी, फोटो र रोचक तथ्य
Xforex: केन्द्र व्यवहार को समीक्षा। विदेशी मुद्रा कारोबार Xforex
कार अलार्म Starline D94: स्थापना र मालिकको समीक्षा
कर्मचारी (P1) - आर्थिक सुरक्षा।
होटल Koblevo: विवरण र समीक्षा